Ohn Mar Oo (CircleRank: 183753, CircleRank in Myanmar: 74) ─ CircleCount.com (Myanmar) Female
Ohn Mar Oo Occupation: Global Campaigns Manager (Burma Democratic Concern (BDC))Her ProfilesRankThis is the rank of 'Ohn Mar Oo' out of all Google+ Profiles.: 163,252 (GenderRankFor the gender 'Women'.: 41,702)Her ProfilesRankThis is the rank of 'Ohn Mar Oo' out of all Google+ Profiles. in Myanmar: 74 (GenderRankFor the gender 'Women'.: 15)Her CircleRankThis is the rank of 'Ohn Mar Oo' out of all indexed profiles and pages at CircleCount.com.: 183,753Her CircleRankThis is the rank of 'Ohn Mar Oo' out of all indexed profiles and pages at CircleCount.com. in Myanmar: 74Followers: 526Following: 516Added to CircleCount.com: 12/18/2011That's the date, where Ohn Mar Oo has been indexed by CircleCount.com.This hasn't to be the date where the daily check has been started. (Update nowYou can update your stats by clicking on this link!This can takeafew seconds.)
﻿Latest postings2013-01-24 13:44:07 (0 comments, 1 reshares, 8 +1s)Thanks for the invitation.
2012-09-26 12:09:15 (9 comments, 1 reshares,2+1s)
2012-07-05 10:56:08 (7 comments,0reshares,3+1s)Immigration Control, Corruption & Education in Burma
2012-06-23 13:37:44 (3 comments,0reshares, 1 +1s)My best comrade with lovely dressing ! Stylish :)
2012-06-13 13:42:27 (11 comments, 1 reshares,0+1s)ရခိုင်ပြည်တွင်း အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက် ရိုဟင်ဂျာခေါ်ဘင်ဂါလီလူမျိုးခြားများ ၏ မြန်မာ ရခိုင်လူမျိုး များအပေါ် လူမျိုးတုန်းတိုက်ခိုက်ခြင်းများအပေါ် ယူကေမှ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် 2012-06-05 17:33:46 (1 comments,3reshares,5+1s)
2012-06-02 17:48:24 (0 comments, 1 reshares, 1 +1s)ဒီနေ့လန်ဒန်ကနံပတ်၁၀ဒေါင်းနင်းလမ်းရှေ့မှာဆန္ဒဖော်ထုတ်ပီး ဗြိတိန်ဝန်ကြီးဒေးဗစ်ကမရွန်း ဆီမှာကျွန်မတို့လန်ဒန်ကြော်ငြာစာတမ်းရယ်၊ လန်ဒန်မှာရှိနေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမတွေရယ်အားလုံးပါဝင်တောင်းဆိုထားတဲ့သမိုင်းမှန်ပေါ်ပေါက်လာဖို့ရယ်ကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်၊မှားနေတာကိုမှားပါတယ်လို့ထောက်ပြပီးတာဝန်တွေကိုအားလုံးခွဲဝေယူလုပ်ဆောင်ဖို့တိုင်းပြည်အတွက်သမိုင်းဝင်စာမျက်နာတခုဖွင့်လ... more »
2012-06-02 17:31:43 (2 comments,3reshares, 1 +1s)မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ…ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၁ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သော “ရိုဟင်ဂျာသည် ဗမာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သော ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ကြောင်း” ဆန္ဒပြပွဲကို အခုလိုအောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်ရန် အဖတ်ဖတ်မှ ပါဝင်ခဲ့ကြသော ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက် အကျွန်တို့ ရခိုင်မောင်မယ်များနှင့် တိုင်းရင်းသား ညီအကိုယ် မောင်နှမ အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့် ယခုကဲ့သို့ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ရိုဟင်ဂျာ(ခေါ်) သမိုင်းလိမ် (ဘင်္ဂလီ) များအကြောင်းကို ဒီထက်မက စနစ်တကျဖေါ်ထုတ်ပြီး ပြည်ထောင်စုကို ကာကွယ်ကာ တည်ငြိမ်းအေးချမ်းသော ပြည်ထောင်စုဗမာနိုင်ငံ(မြန်မာနိုင်ငံ) ကိုအတူလက်တွဲတည်ဆောက်ကြပါစို့….. ဟုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။လေးစားစွာဖြင့်ရခိုင်လူထုအသိုင်းအဝိုင်း(ယူကေ)ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသား မဟုတ်ကြောင်း ဗြိတိန် ဝန်ကြီးချုပ်နေထိုင်ရာ ဒေါင်းနင်းလမ်း၌ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်မောင်ရမ္မာရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ကြောင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ် ဖေါ်ပွဲ... more »
2012-05-29 12:37:16 (4 comments,3reshares,4+1s)Burma isacountry that is desperately poor. According to recent international estimates, 32% of the population live below the poverty line and, excludingasmall rich elite, the rest are only just above it.signs of poverty everywhere in Rangoon - children with distended stomachs, people scavenging through rubbish and families buying coal to cook on open fires, owing to the intermittent and expensive electricity supply.Outside the major cities, the situation is far worse.
2012-05-14 13:06:35 (0 comments,3reshares,0+1s)Burma Democratic Concern (BDC) calls for Burmese government, parliamentarians and all the people to work the utmost possible to achieve peace reality in Kachin land14 May 2012Burma Democratic Concern (BDC) call for Burmese military to stop offensive against Kachin troops who are fighting for equal rights for Kachin people.Especially, we would like to press here that Burmese President U Thein Sein had called for halting offensive in Kachin state but we are very sad to learn that there are increase fighting between Burmese military and Kachin army even after his presidential order.We are very much concerned that as the results civilians; especially children, women and elderly are paying the price dearly. These disadvantaged people fleeing from the fighting between two armies are facing very difficult hardships. We would like to call for international community... more »
2012-05-05 19:21:08 (6 comments,2reshares, 1 +1s)TIME FOR ACTION !!!!!! အချိန်ရောက်ပီသူငယ်ချင်းတို့ရေ !!!!!!!ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ စကား“နောက်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကို တကယ်ကာကွယ်မယ့်သူတွေဟာ ပြည်သူတွေပဲ။သည့်ပြင် လူတွေဆိုတာ ဒီလောက် မဖြစ်နိုင်ဘူး။”--------------------=========---------------ကျွန်မတို့ဖြေရှင်းချင်သောပြသနာကိုဖြေရှင်းရန်မြန်မာပြည်မှသူငယ်ချင်းများကိုလက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ပါသည်။အလုပ်သင့်ဆုံးနဲ့ထိရောက်မြန်စေတာကမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံတကာသံရုံးတွေကိုအချက်အလက်နဲ့တကွရှင်းလင်းတင်ပြစာပေးပို့ကျဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လူထုဆဒ္ဒပြပွဲတွေနဲ့ဖော်ထုတ်ပါ။အဲဒါအရေးကြီးဆုံးပါ၊ပြီးရင်သတင်းငှါနတွေရဲ့အကြီးဆုံးဆီကိုပို့ဆောင်သင့်ပါတယ်။လူထုလက်မှတ်တွေကောက်ခံခြင်းနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာထိရောက်တဲ့နည်းတွေပါရှင်။... more »
2012-04-30 19:03:30 (1 comments, 1 reshares, 1 +1s)ဒီနေ့နိုင်ငံတကာကသံအမှတ်ကြီးများ၊လူ့အခွင့်အရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများအားလုံးပါဝင်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးအစီရင်ခံစာဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဖိတ်ကြားတဲ့အတွက်ကျွန်မတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပီး ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ယခုလက်ရှိစစ်ပွဲများဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကချင်ဒေသစစ်ပွဲများရပ်စဲအောင်၊ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်မည်သို့ကူညီဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတာကိုဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Foreign Secretary Mr William Hague ကိုမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဗြိတိန်အစိုးရကမြန်မာအစိုးရကိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပီးဖိအားဆက်လက်ပေးနေမယ်၊ကြိုးစားပေးနေမယ်လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မကိုယ့်နိုင်ငံက... more »
2012-04-30 19:02:25 (0 comments,0reshares,0+1s)Today, UK Government launched the 2011 Foreign & Commonwealth Office Report on Human Rights and Democracy and Burma Democratic Concern (BDC) is honoured to be invited.Myo Thein, Director of the Burma Democratic Concern (BDC) attended the occasion representing Burma.During the launch, Myo Thein has raised the question to the Foreign Secretary Mr William Hague regarding the situation in Kachin State and what efforts has the British Government been doing to stop fighting, to achieve peace and national reconciliation. Mr Secretary said that British Government has been asking Burmese Government to cease hostilities and to make every effort to stop fighting and to achieve peace in Burma.For more information you can be reached at : 00-44-7402859528
2012-04-29 08:15:24 (4 comments,0reshares,3+1s)လူဦးရေအဆမတန်တိုးပွါးမှူကြောင့်  သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေပြုန်းတီးတာ၊အစာရေစာမလုံလောက်မှူစတဲ့အကျိုး... more »
2012-04-26 11:16:39 (1 comments,0reshares,2+1s)ကျွန်မရင်ထဲလုံးဝမကောင်းဘူးရှင်။မပြောရင်မရတော့တဲ့အခြေအနေမို့ဖွင့်ပြတာပါ၊ကာကယံရှင်ကိုထိခိုက်စေလို၍မဟုတ်ပါဘူးရှင်၊ဒီလိုမျိုးချိန်းခြောက်တာဟာလုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး၊တကြိမ်ထဲမဟုတ်ဘူး၊တယောက်ထဲမဟုတ်ပါ၊ကျွန်မလိုဘယ်သူတွေကောချိန်းခြောက်ခံနေရသလဲမသိပါ၊တိုင်းပြည်တခုလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ရှင်းကိုရှင်းရမဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်၊ကျွန်မခေါင်းမရှောင်နိုင်ပါ၊ပြတ်ပြတ်သားသားရှင်းကိုရှင်းရမဲ့ကိစ္စဖြစ်လာလို့ပါ။နောက်တချက်ကဒီကိစ္စကကျွမ်းကျင်တဲ့သမိုင်းပညာရှင်တွေနဲ့ရှင်းလင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။သတိထားရမှာကကျွန်မတို့လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေးဘက်မနွယ်စေပဲကိုင်တွယ်ရမဲ့ပြသနာတခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုမှန်ကန်တယ်လို့ယူဆလက်ခံနေသူများရှိရင်ပြတ်ပြတ်သားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်၊တာဝန်ယူတာဝန်ခံပီးရှင်းပေးကျပါ။နှစ်ပေါက်တပေါက်လုပ်ပီးပြောရင်ပဲစစ်တပ်ဖက်ကလုပ်သလိုလို၊ဘာသာရေးလူမျိုးရေးကိုဆွဲနွယ်နေတာမျိုးမလုပ်ပဲပြတ်ပြတ်သားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြည်သူတွေကိုချပြပြီးလုပ်ကျပါရှင်။ဒီလိုကိစ္စကတဦးတယောက်ထဲဖြစ်စေ၊နိုင်ငံတကာအစိုးရဖြစ်စေ၊အဖွဲ့အစည်းတွေကဖြစ်စေ၊ပါတီတွေကဖြစ်စေဆန့်ကျင်တာ၊အတင်းသွုတ... more »
2012-04-23 21:06:19 (1 comments,0reshares,2+1s)
2012-04-19 19:16:25 (11 comments,0reshares,4+1s)"အင်တာနက်က ကူညီပေးတဲ့ သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်၊ ကျမသမီးလေးရဲ့အသက်ကလည်း အင်တာနက်ကလူတွေပေးတဲ့အသက်ပဲရှိပါတော့တယ်"အမည် = မအေးယုအောင်မွေးသက္ကရာဇ်= ၂၊ ၆၊ ၁၉၉၆ ဖွားချိန် ၂၀း၃၀နာရီအဖအမည် = ဦးအောင်မျိုး(ခ) ဦးမျိုးဝင်း ဆေးတပ်သား ကိုယ်ပိုင်အမှတ် တ-၈၅၅၉၈၅မှော်ဘီဆေးတပ်ရင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအမိအမည် = ဒေါ်ကြူကြူ သိမ်တန်းရပ်ကွက်၊ အပိုင်း(၂) ကျောက်ကြီးမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးfacebook မှတဆင့် အင်တာနက် သတင်းမိဒီယာ ၀ဒ်ဆိုဒ်များတွင် ၀ိုင်းဝန်းကူညီတင်ပြပေးကြသော သူသူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေများ၏ ကျေးဇူးကြောင့် ပဲခူးမြို့ တွင် တရားသူကြီးဦးအောင်ဘုန်းဝင်း၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ဖြူဝင်းသက်မှ မီးပူနှင့်ကပ်ခဲ့ရသော အသက်(၁၅)နှစ်အရွယ် အိမ်ဖော်မလေး မအေးယုအောင်၏ မိခင်ဖြစ်သူ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့  မှ ဒေါ်ကြူကြူ ကြားသိရပါသဖြင့် (၄၊ ၅၊ ၂၀၁၂)ရက်နေ့တွင် ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီး ဦးအောင်ဘုန်းဝင်းရှိရာ ပဲခူးမြို့နယ်တရားရုံးသို့သွားရောက်စုံစမ... more »
2012-04-18 19:08:23 (0 comments,0reshares,0+1s)Energy is an essential for development. Burma must work to ensure providing sufficient electricity and gas for all the citizens of Burma. http://www.bdcburma.org
2012-04-18 18:18:38 (0 comments,0reshares, 1 +1s)
2012-04-17 10:01:03 (0 comments,0reshares, 1 +1s)မင်္ဂလာပါဒီနေဟာမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်နှစ်ဟောင်းကုန်ပြီးနှစ်သစ်ကိုရောက်တဲ့မင်္ဂလာနှစ်သစ်ရဲ့ပထမဆုံးနေ့ ဖြစ်တဲ့ " နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ " ဖြစ်ပါတယ်"ညီအကိုမောင်နှစ်မအားလုံး နှစ်သစ်မှာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီးလိုရာဆန္ဒများနဲ့ ပြည့်ဝကြပါစေလို့ Burma Democratic Concern (BDC)အဖွဲ့ကဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်" - ၁၃၇၄ ခု၊တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၁၁ ရက်http://youtu.be/LrPlTFk_-xg... more »
2012-04-15 20:25:28 (0 comments, 1 reshares,2+1s)
2012-04-13 12:52:30 (0 comments,0reshares, 1 +1s)Burma: Cameron to offer Whitehall training if democracy is embracedDavid Cameron will today offer Myanmar training from Whitehall civil servants, if it abandons military rule in favour of “a flowering democracy”.If Myanmar commits to reforms, it will be given support on “peace and reconciliation” using Britain’s experience during the Northern Ireland ceasefire process.The country will also be offered lessons on sound management of public finances, the rule of law and strengthening parliamentary processes.Burmese civil servants and opposition politicians would be trained up by British officials on topics such as respect for human rights.Mr Cameron would also like to initiate parliamentary exchanges betweenMPs from both countries, which haveashared colonial past.“The Prime Minister will make clear the UK stands ready to provide support to Burma if it continue... more »
2012-04-13 12:52:09 (2 comments, 1 reshares,2+1s)ပဋိုပက္ခ ဖြေရှင်းနည်း ၅ ခုဒီနေ့ခေတ်မှာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဘာသာရပ်ဟာ အရမ်းကို ခေတ်စားလာပါတယ်၊ အဲဒီထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င် ဖြစ်တဲ့ Conflict Management ပဋိပက္ခ ဖြေရှင်းနည်းအကြောင်းလေးကို share လုပ်ပါရစေ၊ ဒီနေ့ခေတ် နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရတော့ ဒါဟာ မသိမဖြစ်လို့တောင် ပြောရမှာပါပဲ။ဒီပုံစံကို Thomas - Kilmann Style လို့ ခေါ်ပါတယ်။Assertiveness ဆိုတဲ့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို ရှေ့တန်းတင်ခြင်းနှင့် Cooperation လို့ခေါ်တဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ၂ခုကို ယှဉ်ပြထားပါတယ်။ပဋိုပက္ခ တစ်ခုဖြစ်လာရင် ဖြေရှင်းနည်း ၅ ခု ရှိပါတယ်..(၁) Competing - အင်အားသုံး၊ ဖိအားပေးဖြေရှင်းခြင်းပါ။ Forcing လို့လဲ သုံးပါတယ်။ သူနိုင်ရင်ကိုယ်ရှုံး၊ သူရှုံးရင်ကိုယ်နိုင် (win-lose situation) ပုံစံမျိုးပါ၊ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်လာပေမဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကတော့ လုံးဝကို မရှိနိုင်ပါဘူး။ (၁၉၈၈ အာဏာသိမ်းခြင်း)(၂) Avoiding - ရှောင်ရှားခြင်းပါ၊ နှစ်ဖက်လုံး ဒါမှမဟုတ် တစ်ဖက်ဖက်က ဒီပြဿနာကို ပါဝ... more »
2012-04-13 12:51:50 (1 comments,0reshares,2+1s)Latestအမေစုပြည်သူတွေဘဝအရမ်းဆင်းရဲနေပါတယ်ရှင်၊စစ်အစိုးရကတော့ဘယ်သူသေသေငတေမာလုပ်မှာပါ၊မရရင်ရတဲ့တရုပ်စီအကုန်ထိုးအပ်မှာ၊ပြည်သူတွေကတကယ်တော့အရမ်းမျော်လင့်နေကျတာပါ၊ပြည်သူတွေအရမ်းအထိနာနေပါပီ။12.00 Aung San Suu Kyi backs the suspension of sanctions saying it would "strengthen the hand" of reformers in the Government.11.58 Speaking alongside Aung San Suu Kyi, David Cameron says: "I think it is right to suspend the sanctions that there are against Burma. Kelland Stevenson, Save the Children’s country director in Myanmar, said:More thanamillion children under five in Myanmar are suffering from chronic malnutrition brought on by poverty and inadequate spending on health care. Chronic malnutrition has severe long term effects on children’s health as they growMalnutrition limits their physical growth, weakens their immune system and signifi... more »
2012-04-10 21:54:57 (0 comments, 1 reshares, 1 +1s)
2012-04-10 20:30:53 (0 comments,0reshares,0+1s)Foreign investors can help restore Burma's long-decayed infrastructure and build factories to create jobs. Free trade and access to fertilizers will enable the country to again becomealeading exporter of rice and other crops. Foreign investment will also help revive an educational system once the best and now the worst in Southeast Asia.Ending sanctions will not itself sort out Burma's current economic mess, but it can create the right constituencies for reform. Progress for the Sein government's efforts is slow, partly because of the lack of well-trained people, and partly because of entrenched bureaucratic and crony networks who may not like reform. As one foreign economist put it, "The head is moving fast, but the legs cannot keep up."
2012-04-09 10:22:03 (0 comments, 1 reshares, 1 +1s)မစ်ဆုံစီမံက်ိန်းတွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ချို့သာ ကျန်ရှိတော့ပြီး စက်ယန္တရားများကိုလည်း ရွှေ့ထုတ်၊ ပြန်သယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်နေသည်ဟု သိရကြောင်းနှင့် စီမံကိန်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေမှု လုံးဝမရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်းပြောကြားကချင်ပြည်နယ်၊ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ တစ်ချို့သာကျန်ရှိတော့ပြီး စက်ယန္တရားပစ္စည်းများကိုလည်း ရွှေ့ထုတ်ခြင်း၊ ပြန်သယ်ခြင်းများပြုလုပ်သွားရန် စီစဉ်နေသည်ဟု သိရကြောင်းနှင့် စီမံကိန်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေမှု လုံးဝမရှိပါကြောင်း အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးဇော်မင်းမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အဆိုပါအချက်ကို ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ Sedona Hotel တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော ကေအန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တို့၏ ပထမအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦး ဇော်မင်းမှ Sky Net ရုပ်သံမှ မေးမြန်းမှုကို ဖြေကြားရာတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်... more »
2012-04-06 15:35:14 (0 comments,0reshares,0+1s)
2012-04-06 10:09:01 (0 comments,0reshares,0+1s)Burma Democratic Concern (BDCs) warmly welcome US Government Easing Sanctions on Burma5April 2012Burma Democratic Concern (BDCs) warmly welcome US Government easing sanctions on Burma in light of the by-election and the other progress of recent months. To recognize and embrace the progress that has taken place, Burma Democratic Concern (BDCs) and Burmese people are very glad to learn that US Government is prepared to take five main steps such as—1. First seeking agreement forafully accredited ambassador in Rangoon in the coming days, followed byaformal announcement of our nominee; 2. Second, establishing an in-country USAID mission and supportinganormal country program for the United Nations Development Program;3. Third, enabling private organizations in the United States to pursueabroad range of nonprofits activities from democracy b... more »
2012-04-06 09:04:19 (0 comments,0reshares,0+1s)ရော့ကီးတောင်တန်းများပေါ်မှ မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်းသို့ မျှော်ကြည့်ခြင်း(က) ကျနော်တို့ချစ်လှစွာသော လင်းယုန်ကြီးရဲ့̏ မြစ်ဧရာပေါ်ဝယ်̋ ထဲမှာ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ ဗောဓိသတ္တတွေရဲ့ အလုပ်ဖြစ်တယ် ...̋ တဲ့။ နာဇီဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးသမား ဂျူးလိယက်ဖူးချစ် ရဲ့ကြိုးစင်ပေါ်ကမှတ်တမ်းများထဲမှာ ̏ သင်တို့ကိုကျွနု်ပ် မမုန်းပါ၊ သင်တို့ဟာ သနားစရာ သတ္တ၀ါတွေ ဖြစ်တယ် ...̋ တဲ့။ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုထွန်းအောင်ကျော် က အသတ်ခံရဆဲဆဲမှာ ̏ ... မှားမယ်နော် ̋ တဲ့။ ဒီစကားလုံးတွေဟာ ကျနော်တို့အတွက် သမိုင်းဝင်စကားလုံးတွေ ဖြစ်လာမှာပါ၊ ဒီစကားလုံးတွေကို ကျနော်တို့ရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ ထာဝရ သိမ်းထုပ်ထားလိုက်ပါ့မယ်။(ခ)၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုသမိုင်းကို ပြန်ပြောကြတဲ့ အခါတိုင်း ဆရာမောင်ခိုင်မာရဲ့ ကဗျာလေးတပိုဒ်ကို သွားသတိရမိတယ်။ ̏ မောင်လေးအောင်၊ မောင်ယဉ်မွန်ဆိုတာဆိုလာချွေးနံ့ပျောက်ဆေးလိုမွှေးသလ... more »
2012-04-05 21:56:52 (0 comments, 1 reshares, 1 +1s)Burma Democratic Concern (BDCs) warmly welcome US Government Easing Sanctions on Burma (5 April 2012) Burma Democratic Concern (BDCs) warmly welcome US Government easing sanctions on Burma in light of the by-election and the other progress of recent months. To recognize and embrace the progress that has taken place, Burma Democratic Concern (BDCs) and Burmese people are very glad to learn that US Government is prepared to take five main steps such as bdcburma.org
2012-04-05 12:17:50 (0 comments,0reshares,0+1s)Burma Democratic Concern (BDCs) warmly welcome US Government Easing Sanctions on Burma5April 2012Burma Democratic Concern (BDCs) warmly welcome US Government easing sanctions on Burma in light of the by-election and the other progress of recent months. To recognize and embrace the progress that has taken place, Burma Democratic Concern (BDCs) and Burmese people are very glad to learn that US Government is prepared to take five main steps such as—1. First seeking agreement forafully accredited ambassador in Rangoon in the coming days, followed byaformal announcement of our nominee; 2. Second, establishing an in-country USAID mission and supportinganormal country program for the United Nations Development Program;3. Third, enabling private organizations in the United States to pursueabroad range of nonprofits activities from democracy b... more »
2012-04-05 09:59:37 (0 comments,0reshares, 1 +1s)Burma Democratic Concern (BDCs) warmly welcome US Government Easing Sanctions on Burma5April 2012Burma Democratic Concern (BDCs) warmly welcome US Government easing sanctions on Burma in light of the by-election and the other progress of recent months. To recognize and embrace the progress that has taken place, Burma Democratic Concern (BDCs) and Burmese people are very glad to learn that US Government is prepared to take five main steps such as—1. First seeking agreement forafully accredited ambassador in Rangoon in the coming days, followed byaformal announcement of our nominee; 2. Second, establishing an in-country USAID mission and supportinganormal country program for the United Nations Development Program;3. Third, enabling private organizations in the United States to pursueabroad range of nonprofits activities from democracy b... more »
2012-04-04 14:04:56 (0 comments, 1 reshares,2+1s)စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့လေတရုပ်ကြိုက်လေပါ။ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ကျွန်မတို့နိုင်ငံ position ကအုပ်ချုပ်သူတွေမငဲ့ညှာမှူကြောင့် ဓားစာခံကပြည်သူတွေ။တရုပ်ဝင်ရင်တိုင်ရီလိုကိစ္စတွေကနေရာအနှံ့ဖြစ်နေအုန်းမှာပါ။သူတို့ကဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုယ်ကျိုးကြည့်နေကျမှာပဲ၊အကောင်းဆုံးပြည်သူတွေမနစ်နာအောင်ဘယ်လိုကျွန်မတို့လုပ်ကျမလဲစဉ်းစားဖို့ပါရှင်၊ ( မြန်မာနိုင... more »
2012-04-04 11:30:38 (0 comments, 1 reshares, 1 +1s)တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ဘယ်လောက်ရှိသလဲ?ဤဆောင်းပါးသည်တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်နှင့်ကမ္ဘာ့အလယ်တွင်အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဘဝသို့ရောက်နေသော အမိမြန်မာနိုင်တော်ကြီးကိုမည်ကဲ့သို့စိတ်ထား နှင့်ကမ္ဘာထိပ်တန်း နိုင်ငံဘဝသို့ရောက်ရန် ဝိုင်းဝန်းလုပ် ဆောင်သင့်သည်ကိုရည်ရွယ်၍ရေးသား လိုက်ပါသည်။ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို NLD ပါတီမှ အများစုအနိုင်ရလိမ့်မည်ဟုယူဆသူများရှိ သော်လည်း ၄၄နေရာပြိုင်၍ ၄၄နေရာစလုံး နိုင်လိမ့်မည်ဟု မည်သူကမျှ မထင်ထား ကြချေ ။ အထူးသဖြင့် နေပြည်တော်မြို့နယ်များတွင်အနိုင်ရဘို့ဖြစ်နိုင်ချေနည်းသည်ဟုစာရေးသူကိုယ်တိုင်ထင် မှတ်ခဲ့သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုနယ်မြေများသည် နအဖ မှစံနစ်တကျမိမိ ကိုယ်ပိုင် နယ်မြေ အဖြစ်သိမ်းသွင်း ဖွဲ့စည်းထားခဲ့သောကတ်သေအပိုင်နယ်မြေများဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်မထင်မှတ်သည်များက ဖြစ်လာခဲ့ရသည်။ ဘာကြောင့်နည်း? ၁။ ပြည်သူများ နိုင်ငံရေးအရထကြွနိုးကြားမှုရှိနေခြင်း၂။ ပြည်သူများ နှင့် အစိုးရလခစားများကိုယ်တိုင်၏ အမှန်တရားကိုလိုလားခြင်း၊ လွတ်လပ်စွာ နေထိုင် စီးပွါးရ... more »
2012-04-04 11:21:06 (0 comments,0reshares,0+1s)တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ဘယ်လောက်ရှိသလဲ?ဤဆောင်းပါးသည်တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်နှင့်ကမ္ဘာ့အလယ်တွင်အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဘဝသို့ရောက်နေသော အမိမြန်မာနိုင်တော်ကြီးကိုမည်ကဲ့သို့စိတ်ထား နှင့်ကမ္ဘာထိပ်တန်း နိုင်ငံဘဝသို့ရောက်ရန် ဝိုင်းဝန်းလုပ် ဆောင်သင့်သည်ကိုရည်ရွယ်၍ရေးသား လိုက်ပါသည်။ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို NLD ပါတီမှ အများစုအနိုင်ရလိမ့်မည်ဟုယူဆသူများရှိ သော်လည်း ၄၄နေရာပြိုင်၍ ၄၄နေရာစလုံး နိုင်လိမ့်မည်ဟု မည်သူကမျှ မထင်ထား ကြချေ ။ အထူးသဖြင့် နေပြည်တော်မြို့နယ်များတွင်အနိုင်ရဘို့ဖြစ်နိုင်ချေနည်းသည်ဟုစာရေးသူကိုယ်တိုင်ထင် မှတ်ခဲ့သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုနယ်မြေများသည် နအဖ မှစံနစ်တကျမိမိ ကိုယ်ပိုင် နယ်မြေ အဖြစ်သိမ်းသွင်း ဖွဲ့စည်းထားခဲ့သောကတ်သေအပိုင်နယ်မြေများဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်မထင်မှတ်သည်များက ဖြစ်လာခဲ့ရသည်။ ဘာကြောင့်နည်း? ၁။ ပြည်သူများ နိုင်ငံရေးအရထကြွနိုးကြားမှုရှိနေခြင်း၂။ ပြည်သူများ နှင့် အစိုးရလခစားများကိုယ်တိုင်၏ အမှန်တရားကိုလိုလားခြင်း၊ လွတ်လပ်စွာ နေထိုင် စီးပွါးရ... more »
2012-04-04 11:20:34 (0 comments,0reshares,0+1s)ကျွန်မတို့အခုအချိန်မှာ Civil societies တွေအားကောင်းဖို့လိုပါတယ်။နေရာဒေသအလိုက်အဖွဲ့အစည်းတွေကြီးထွားလာဖို့လိုပါတယ်။သို့မှသာပြည်သူတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတဲ့လူထုအဖွဲ့အစည်းတွေဟာလူထုအသံကိုကြားပြောနိုင်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်။လူထုရဲ့အကျိုးစီးပွါးကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်We need to emphasize on strengthening civil societies in Burma, as this is very important.Inademocracy, civil society groups have respect for the law, for the rights of individuals, and for the rights of other groups to express their interests and opinions. Civil society actors could watch how state officials use their powers. They could raise public concern about any abuse of power. They could lobby for access to information, including freedom of information laws, and rules and institutions to control corruption. It is very important that international communities should support them so as t... more »
2012-03-28 11:24:34 (0 comments, 1 reshares,4+1s)ပိုဇေရှင် (Position)ပြီးခဲ့တဲ့ တန၈င်္နွေနေ့ကဖြစ်သည်။ သူငယ်တန်ူးေ၇ာက်နေသော သမီးငယ်ကို သူ၏ မိခင်၊ ကျနော့်၏မိန်းမ ကဆူသည။် ရိုက်သည်။ အကြောင်းရင်းမှာ ဒီဇင်ဘာလစာမေးပွဲတွင် ရမှတ်နည်းပြီး အဆင့်ကျသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။``ညည်း...ညံ့လှချေလား။ အောက်တိုလာစာမေးပွဲတုန်းက အတန်းထဲမှာ အဆင့်-၃ ရတယ်...အခု အဆင့် -၄ ဖြစ်သွားပြီ။ အသုံးကိုမကျဘူး´´သမီးက ငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်နေသည်။ ၆နှစ်ဝန်းကျင်ကလေးငယ်လေးဖြစ်သောကြောင့် ဘာမှပြန်မပြောတတ်ပါ။ သူ့အမေကိုပဲကြောက်သည့်စိတ်က လွမ်းမိုးနေသည်။ ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်ဖြစ်ရတာမသက်သာပါ။ နေ၇ာတကာအပြိုင်အဆိုင်များသောကြောင့် ´´အနိုင်အရှုံးကြားထဲတွင် အတ္တဖြင့် ပိတ်လှောင်မိနေတသာ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ပျိုးပင်ကလေးများဖြစ်နေသည်။´´ကို ကျနော် သတိပြုမိသည်။ ကျနော်တို့ မိသားစုအတွင်းမှာ ဒီလိုပြသနာမျိုး၇ှိသည်မဟုတ်။ မိသားစုတိုင်းတွင် ´အတ္တမျိုးစေ့´ ကိုေ၇နူးပေးနေကြသည်။ ထိုကြောင့် အတ္တလူ့အဖွဲ့အစည်းကြားထဲတွင် ကျနော်စိတ်မချမ်းမြေ့ပါ။ ``ဒီမယ်ချစ်ပေါက်´´ သူ့အမေငေါက်ငမ်းငမ်းခေါ်သံဖြစ်သည်။ သမီးရဲ့ အိမ်နာမ... more »
2012-03-27 13:37:36 (2 comments, 1 reshares, 1 +1s)လမ်းဘေးဒါဏ်ရာဖြင့်လဲနေသော ကလေးငယ်ကို ကူညီရန် ဗဟန်းရဲစခန်းကရဲအရာရှိမှ တာဝန်မယူနိုင်ကြောင်းငြင်း။၂၅.၃.၂၀၁၂ ၊တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ဗဟန်းမြို့နယ် ရေတာရှည်လမ်းဟောင်း၊ဗဟန်းမြို့နယ်ရဲစခန်းအနီး ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် အသက်(၈)နှစ်အရွယ်ရှိ ကလေးငယ်တဦး ဒါဏ်ရာများဖြင့် လဲနေသည်ကို တွေ့ရှိသောကြောင့် အနှေးယာဉ်လုပ်သားကိုသံချောင်းမှ ဗဟန်းရဲစခန်းသို့အကြောင်းကြားခဲ့သည်။ ဗဟန်းရဲစခန်းတာဝန်ကျအရာရှိမှ အဆိုပါကိစ္စကို မိမိတို့ရဲစခန်းမှ တာဝန်မယူနိုင်ကြောင်း၊ မကူညီနိုင်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ အနှေးယာဉ်လုပ်သား ကိုသံချောင်းသည် ရဲစခန်းကို တာဝန်သိပြည်သူတယောက် အနေဖြင့် သတင်းသွားပို့သော်လည်း ရဲအရာရှိ၏ ငြင်းပယ်မှုကြောင့် လဲနေသောကလေးထံပြန်သွားပြီး လမ်းသွားလမ်းလာများနှင့် အနှေးယာဉ်လုပ်သားများ မှ တတ်နိုင်သမျှငွေကြေးစိုက်ထုတ်ခါ တက္ကစီကားဖြင့် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပြီး ကလေးရဲ့မိဘများကိုဆက်သွယ်မှုရရန်ကြိုးစား ဆောင်ရွက်နေသည်။ထိုသို့ တာဝန်ကျရဲအရာရှိရဲ့ တာဝန်မဲ့မှုနှင့် ပြည်သူထဲက အနှေးယာဉ်... more »
2012-03-27 13:37:07 (0 comments,0reshares,0+1s)ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ တပ်မတော်နေမတ်လ ၂၆-ရက်နေ့ ညတိုင်းဆိုရင် ကျနော်တို့ အရမ်းအလုပ်ရှုပ်တယ်။ စံပယ်ပန်းတွေသီရတယ်။ ကောက်ညင်းပေါင်းနဲ့ စားစရာတွေ ထုတ်ပိုးရတယ်။ ဒီလိုရှုပ်ပေမဲ့ပျော်စရာအရမ်းကောင်းတယ်။ တစ်အိမ်တစ်ယောက် မလိုက်မနေရဆိုပြီး တပ်ရင်းမှုးက အမိန့် ထုတ်တယ်။ အထူးသဖြင့် မိန်းမတွေလိုက်ရတယ်။ အဖေက လုံခြုံရေး တာဝန်ယူရတယ်။ အမေက ပန်းသီးတယ်။ ကျနော်က ကောက်ညင်းပေါင်းအိုးကို ထမ်းတယ်။ ဒါက ကျနော်တို့ တာဝန်။ မနက်နှစ်နာရီဆိုရင် တပ်ရှေ့ မှာ စစ်ကားသုံးလေးစီးက အဆင့်သင့်နေရာယူထားတယ်။ အပျိုချောလေးတွေလည်း မနည်းဘူး။ သူတို့ က ကြိုဆိုရေးရဲ့ အဓိကလူတွေ။ မျက်နှာမှာ မိတ်ကပ်တွေနဲ့ သစ်လွင်တောက်ပသော အင်္ကျီတွေနဲ့ ဆိုတော့ ကြည့်ရတာ ဘုရားပွဲတော်ကိုသွားသလိုပဲ။ စစ်ကားကလည်း လူအယောက်ငါးဆယ်လောက်ဆန့် တယ်။ ကားပေါ်ကို အပျိုချောတွေကော လူပျိုချောတွေကော တက်ကြတယ်။ စကြနောက်ကြနဲ့ ။ မနက်နှစ်နာရီမှာ ဘာ့ကြောင့်သွားရလဲဆိုတော့ နေရာမရမှာစိုးလို့ ။ တပ်ပေါင်းစုံက စစ်သားသမီးတွေ၊ သူတို့ အဖေတွေနဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကို ကြိုဆု... more »
2012-03-27 13:36:17 (0 comments,0reshares,0+1s)
2012-03-26 11:38:19 (0 comments, 1 reshares,0+1s)http://www.flickr.com/photos/bdcburma/
2012-03-26 11:33:59 (1 comments,0reshares,0+1s)
2012-03-26 11:18:08 (1 comments,0reshares, 1 +1s)"ကျွန်မတို့ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုယ်သိကြရအောင်ပါရှင်"!!!!!!အိပ်ခန်းထဲ၌ စလောင်းတီဗီမှ အင်တာဗျူးတစ်ခု လာနေသည်။ ၄င်းအင်တာဗျူးကို စိတ်ဝင်တစား နားထောင်မိခဲ့သည်။ သဘောကျသည်။ယင်းအင်တာဗျူးတွင် မူကြိုကျောင်းမှ ဆရာမငယ်တစ်ယောက်ကို မေးမြန်းခြင်းဖြစ်သည်။ပြထားသော နောက်ခံလှုပ်ရှားမှုတွင် ကလေးငယ်များက မြက်ခင်းပေါ်တွင် ဆော့ကစားနေကြသည်။'' ဆရာမ တာဝန်ထမ်းတာ ကြာပြီလား '''' (၃) နှစ်လောက်ရှိပြီ '''' ဘာတာဝန်ယူရသလဲ '''' ကလေးတွေရဲ့ စရိုက်သဘာဝကို သူတို့စရိုက်အမှန်အတိုင်း မိဘတွေသိဖို့၊ ကလေးတွေကိုယ်တိုင်သိဖို့ တာဝန်ကို ယူရတယ် '''' မူကြိုဆရာမအလုပ်ကို ဘာကြောင့်ရွေးချယ်ဖြစ်တာလဲ '''' နောင်တစ်ချိန်မှာ တန်ဖိုးအရှိဆုံး လူသားတွေဖြစ်လာမဲ့ ကလေးငယ်တွေကို အသေအချာ လေ့လာခွင့်၊ ထိတွေ့ခွင့်ရတဲ့ အလုပ်ဆိုတာ မူကြိုဆရာမ အလုပ... more »
2012-03-26 10:22:40 (0 comments,0reshares,0+1s)အလုပ်သမားသမဂ္ဂများဖွဲ့ စည်းပြီးကြောင်း မိတ်ဆက်တင်ပြခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခြင်း ကျနော်ကျမတို့ ၏ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများဖြစ်သော ချည်မျှင်နှင့် အထည်ချုပ်အလုပ်သမားများသမဂ္ဂ နှင့်ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်သမားများသမဂ္ဂကို ၂၅-၃-၂၀၁၂ တနင်္ဂနွေနေ့ တွင် ဒီမိုကရေစီနည်းကျဖွဲ့ စည်းပြီးကြောင်း မိတ်ဆက်တင်ပြခြင်းနှင့် ဆက်လက်၍ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်သွားမည် ဖြစ်သည်ကို ရှင်းလင်း တင်ပြသွားမည် ဖြစ်၍ ကြွရောက် ချီးမြှင့်ကြပါရန် လေးစားစွာဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ နေရာ - ကျော်ဟိန်း လက်ဘက်ရည်ဆိုင်၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာမြို့ နယ်၊ အမိုးကြီးကားဂိတ် (၅၇၊ ၉၉ ဒိုင်နာ၊ ၁၇၇ ကားများစီး) အချိန် - ၁၁း၀၀ မှ ၂း၀၀ နေ ့ရက် - ၂၇-၃-၂၀၁၂ သ... more »
2012-03-22 14:11:08 (0 comments, 1 reshares,2+1s)Warm greeting to you all! You are cordially invited and your present will be very much appreciated. Burma Democratic Concern (BDC) will be celebrating anniversary of Burma’s Resistance Day, anniversary of Burma Democratic Concern (BDC) founding ceremony and Ko Myo Yan Naung Thein’s Birthday on 25th March 2012 (Sunday) from 10:00 to 18:00 at The SASANA RAMSI VIHARA (Colindale Buddhist Monastery) 83 Booth Road, Colindale, NW9 5JU, London, United Kingdom Date: 25 March 2012 (Sunday) Time: 10:00 – 18:00Place: The SASANA RAMSI VIHARA (Colindale Buddhist Monastery)Address: 83 Booth Road, Colindale, NW9 5JU, London, United KingdomFor more information please contact us at Ko Myo Thein, myothein19@gmail.com, 07877882386, 07402859528Ma Ohnmar Oo, shinminoo@gmail.com, 07727236419, 02084939137 Ko Htein Lin, linht... more »
2012-03-17 12:10:08 (0 comments,2reshares,0+1s)တောက်- ရင်နာလိုက်တာကွာနွားတွေကွဲနေလို့ကျားဆွဲခံရတာအဆန်းမှ မဟုတ်တာပဲ။တရားရုံးမှာအပြိုင်အဆိုင် အမွေလုကြရင်း၊ဘိုးဘွားပိုင်အမွေတွေတစထက်တစလျော့နည်းပပျောက်သွားတတ်တာအဆန်းမှ မဟုတ်တာပဲ။သို့ပေမယ့်လေ----ငါ့နယ်မြေ၊ သူ့နယ်မြေဆိုပြီးရှိပြီးသား မြေပုံပေါ်မှာအရေးအကြောင်းတွေကိုသွေးမှင်နဲ့ဆွဲကောင်းနေကြတုန်း၊ခွေးအတွေကမြေပုံရဲ့ အနားစလေးတွေကိုဖဲ့စားပစ်လိုက်ကြတဲ့အခါ.....။တမြေတည်းမွေးသူတွေ အချင်းချင်းကျတော့မြေတလက်မ၊ အာဏာတပဲသားအတွက်ဓားဆွဲကြ၊ သေနတ်ဆွဲကြ၊နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာသူ့ဘက်၊ ကိုယ့်ဘက်ခွဲလို့အပြိုင်အဆိုင်ဟစ်ကြနဲ့လက်မနှေး၊ ပါးစပ်မနှေးကြသူတွေ၊တိုင်းတပါးသားတွေကပြည်ပအချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါးလာတာကျတော့ခေါင်းကလေးတွေငုံ့လို့ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေကြတာကိုတွေ့မြင်လာရတဲ့အခါ...။... more »
2012-03-16 18:45:49 (0 comments,0reshares,0+1s)Burma Democratic Concern (BDC) would like to reaffirm our position that we will be keep on working: - to restore democracy, human rights and rule of law in Burma. - to release all the political prisoners. - to establish the independent judiciary system in Burma. - to achieve the ever lasting peace, unity in harmony and equality in diversity in Burma. - to review 2008 constitution to be acceptable for all the people of Burma. - to flourish Civil Society Organisations (CSOs) and Community Based Organisations (CBOs) in Burma. - to flourish freedom of assembly, association and expression in Burma. - to flourish freedom of media, social media, internet and information technology in Burma. - to educate citizens of their rights, responsibilities and necessity of taking responsibilities in Burma. ... more »
2012-03-16 18:44:24 (0 comments,0reshares,0+1s)
2012-03-16 18:43:53 (0 comments,0reshares,0+1s)Burma Democratic Concern (BDC) calls for investment in Burma which will significantly boost the welfare of the Burmese people. By removing investment and trade sanction on Burma, Burma Democratic Concern (BDC) truly believes that Burmese citizens will have the benefits of increased investment which can bring technology, knowledge and democratic values since outside investment strengthens private institutions. At the same time, Burma must work hard to end the economics monopoly and cronyism in Burma. Burma Democratic Concern (BDC) welcomes tourists visiting Burma so as to promote ordinary Burmese people engaging with people from around the world.